nuxurka summada daryeelka gsm xilli qaab magac midab cabbirka Astaamaha
60% suuf 40% polyester 180g/ laga wada xaajoon karo guga & xagaaga PLU251505 2-12 sano funaanad Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf 180g/ laga wada xaajoon karo guga & xagaaga PLU245933 2-12 sano funaanad Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf 180g/ laga wada xaajoon karo guga & xagaaga PLU245349 2-12 sano funaanad Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PLU246346 2-12 sano funaanad Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PLU245501 2-3 sano T-shaati Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PLU248662 Gabdhaha socod baradka ah shaadh gacmo dheer ah. Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PG278 Funaanad wiilal yar yar Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PG546 Funaanad wiilal yar yar Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PG872 Funaanad wiilal yar yar Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
100% suuf gorgortanka geli kara guga & xagaaga PG114 Funaanad wiilal yar yar Midab badan oo ikhtiyaari ah, waxaa loo habeyn karaa sida Pantone No. Cabbirka badan ee ikhtiyaariga ah: XXS-XXXL. Ka-hortagga-u-qabsiga, Ka-hortagga-piibinta, Waarta, La Neefsan karo, La cufan, Cabirka Dheeraadka ah
Hore: Shaadhadhka Stretch aadka loo iibinayo Dumarka - Suudhka dhididka cad ee Jiimka Dharka ciyaaraha Jimicsiga labiska ragga ku habboon isboortiga Tababarka jimicsiga Dharka iyo orodka ayaa xidha koofiyadaha ragga - Ruidesen
Xiga: Dhar-gaaban & Dhar-gaab Ins iibka kulul ee sequins-ka qalinka ah
Wiilasha Dharka Jiilaalka
Gabdhaha Shaadhka Tee
Dharka Gabdhaha Carruurta
Caruurta Tees garaaf
Skirts & Shorts Ins iibka kulul ee Silver se...
Bajama jiilaalka cusub jacquard velvet qaro weyn diiran Ko...
Suudhka dhididka caadiga ah ee jimicsiga Dharka isboortiga ee jimicsiga